Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Germany » Ọhụrụ ịnụ ọkụ n'obi, agbamume na ntinye aka na 20th IMEX Frankfurt
IMEX na Frankfurt Show Floor - Foto sitere n'ikike nke IMEX Group
Ndebanye aha meghere taa maka mbipụta 20th ncheta nke IMEX na Frankfurt 31 May - 02 June na ọtụtụ ndị ngosi na ndị na-azụ ahịa ekwenyelarị site na ọtụtụ ngalaba na ahịa. Ndị na-ahazi, IMEX Group, na-ekwu na nke a na-egosipụta na-achọsiwanye ike maka nzukọ zuru ụwa ọnụ, ihe omume na ụlọ ọrụ njem na-akpali akpali iji tọgharịa na ịlaghachi azụ ahịa, ọnụ.
The IMEX otu ga-anabata azụ ọtụtụ n'ime ya ogologo intermediaries guzosie ike, ebe enweela ọhụrụ otu kwụ n'ahịrị si Australia na US. Mgbe ihe ịga nke ọma na IMEX America gasịrị, Egroup ga-ebute otu ndị na-azụ ahịa na Frankfurt maka oge mbụ ebe ndị mmekọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ IMEX - Hilton, Marriott, Radisson, Hyatt na Melia - niile kwadoro iweta ndị ahịa na ihe ngosi ahụ.
N'ime ebe ebe a na-aga, ebe egwuregwu na ndị na-ebubata akwadoro dị ka ndị ngosi bụ Spain, Morocco, Egypt, Latvia, Maritim Hotels na Norwegian Cruise Lines. Leva Gredzena sitere na National Tourism Board nke Latvia na-akọwa, sị: “Ka Latvia na-achọ ka ụwa na-adịghachi ọzọ, IMEX na Frankfurt ga-abụ ebe ahịa dị mkpa maka anyị ịmaliteghachi mmemme nke njem mba ofesi, yana iso ndị ọrụ ibe ọhụrụ na ndị agadi jikọọ.
Carina Bauer, CEO nke IMEX Group kwuru, sị:
"Anyị nwere obi ụtọ ịmalite ndebanye aha maka mbipụta IMEX a pụrụ iche na Frankfurt, ihe ngosi nke wepụtala nnukwu azụmahịa, ịkparịta ụka n'Ịntanet na mmụta maka obodo kemgbe anyị malitere ya afọ 20 gara aga."
"Oké ike na agụụ ime azụmahịa dị oke ụda na nke doro anya na IMEX America na Nọvemba na ọtụtụ n'ime ndị otu ahụ esila na PCMA lọta na Las Vegas ebe ha anụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịnụ ọkụ n'obi, agbamume na ntinye aka maka IMEX na Frankfurt na May. Nke a na-emeghe ụzọ maka ụbọchị atọ na-atọ ụtọ na Frankfurt mgbe oge ruru.”
IMEX na Frankfurt na-ewere ọnọdụ Mee 31 - June 2, 2022 - obodo mmemme azụmahịa nwere ike ịdebanye aha Ebe a. Ndebanye aha bụ n'efu.
eTN bụ onye mmekọ mgbasa ozi maka IMEX.
Ozi ndị ọzọ gbasara IMEX
Ọzọ na: Frankfurt | Las Vegas | Hyatt | Latvia | Tourism | Australia
Zute ndị isi ụlọ ọrụ PATA ọhụrụ Tourism|
Kedu ka Nevis si atụ ndị ọbịa ya n'anya? Tourism|
Australia Frankfurt Hyatt Las Vegas Latvia Tourism